အတွင်း လမ်းညွှန် – Raffles ဆေးရုံ
Raffles အတွက် Ulink’s အတွင်းလမ်းညွှန်
စင်္ကာပူ နိုင်ငံရှိ Raffles ဆေးရုံသည် နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်ကုသသော လူနာတွေအတွက် Parkway ဆေးရုံတွေလောက် နာမည်သိပ်မကြီးပေ။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဆေးရုံတွင်းသာ အာရုံစိုက်ပြီး ပြုလုပ်နေသော စီးပွားရေး စီမံကိန်းများကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖောက်သည် တော်တော်များများက Raffles ဆေးရုံကို ဈေးသက်သာပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှူများ အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ ဖောက်သည်များရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်များအရ အောက်ပါ အချက် (၃) ချက်သည် ၄င်းတို့ Raffles ဆေးရုံကို ရွေးချယ်ရာတွင် အရေးပါဆုံးအချက်များဖြစ်ကြသည်။
၁. အုပ်စုလုိုက် ဆေးကုသခြင်း ပုံစံ
Raffles ဆေးရုံသည် အခြား အစိုးရမဟုတ်သော ကိုယ်ပိုင် ဆေးရုံတွေထက် ထူးခြားသော အချက်မှာ Raffles ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်များသည် ဆေးရုံရှိ ဝန်ထမ်းများ အဖြစ်ဆေးကုသကြသည်။ အခြားဆေးရုံများမှာ ထိုသို့မဟုတ်၊ ဆရာဝန်များမှာ ဆေးရုံတွင် အခန်းသီးသန့်ငှားပြီ ဆေးကုသရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သော ထူးခြားချက်ကြောင့် Raffles ဆေးရုံရှိ ဆရာဝန်များအဖွဲ့မှာ ဆေးကုသရာတွင် ပူုးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ချဉ်းကပ်လေ့ရှိသည်ဟု နာမည်ကြီးကြသည်။
အရေးကြီးဆုံး အချက်မှာ ထိုသို့ စည်းလုံးခြင်းကြောင့် Raffles ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်များသည် ဆေးကုသရာတွင် များစွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ ဥပမာ အခြင်းခြင်း ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆက်သွယ် ရာတွင်လည်းကောင်း ဆေးကုသရာတွင် အမှားနည်းအောင် ရှောင်ရှား ရာတွင်လည်းကောင်း စသည်ဖြစ် များစွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။
၂. ကုန်ကျသလောက် ထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မှု
Raffles ဆေးရုံသည် အခြား ကိုယ်ပိုင် ဆေးရုံတွေလောက် ဆေးကုသစရိတ် ဈေးမကြီးပေ။ စင်္ကာပူ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြုလုပ်ထားသော မှတ်တမ်းများ အရ ၂၀၁၄ တွင် စင်္ကာပူဆေးရုံများမှ ဆေးကုသ စရိတ် ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းချေတွင် Raffles ဆေးရုံသည် အခြား ကိုယ်ပိုင် ဆေးရုံ တွေထက် ကုန်ကျ စရိတ် အနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
၃. ကုန်ကျစရိတ် ခြားနားခြင်း နည်းပါးခြင်း
Raffles ဆေးရုံရှိ အုပ်ချုပ်မှု စနစ်များတွင် ဈေးနှုန်း စံသတ်မှတ်ချက်များလည်း ပါဝင်သောကြောင့် ဆေးကုသပေးသော ဆရာဝန် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယာက် ဈေးနှုန်း အများကြီးကွာခြားခြင်း မရှိပေ။
အဆိုပါ အချက်သည် အခြားဆေးရုံတွေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အားသာသော အချက်ဖြစ်သည်။ အခြား ကိုယ်ပိုင်ဆေးရုံများတွင် ကုသသော ဆရာဝန်အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ဆေးကုသ စရိတ်မှာ ကုန်ကျလေ့ရှိုပြီး ဆေးရုံမှ မည်သည့် ထိန်းချုပ်မှုမှ ပြုလုပ်၍ မရပေ။
အောက်ပါ ရောဂါများသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖောက်သည်များ Raffles ဆေးရုံတွင် ကုသလေ့ရှိသော ရောဂါများဖြစ်ကြသည်။
• ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း
• ပခုန်း အဆစ် လွဲခြင်း
• လက်ကောက်ဝှစ် နာတာရှည် ရောဂါများ
•_ကျောရိုး နှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ
• မျက်စိ အတွင်းတိမ်/အပြင်တိမ် ခွဲစိပ်ခြင်း
• ဆီးလမ်းကြောင်း နှင့် မျိုးပွားမှူ ဆိုင်ရာ ခွဲစိပ်ကုသခြင်း
•_လေးဘက်နာနှင့် အဆစ်အမြစ်များ ဆိုင်ရာရောဂါများ
• အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သတ်သော ရောဂါများ
Raffles ဆေးရုံတွင် ဆရာဝန်ပေါင်း ၁၇၈ ဦးကျော်ရှိရာ၊ အောက်ပါ ဆရာဝန်များသည် လူနာများထံမှ ရရှိသော တုန့်ပြန်ချက်များအရ အကောင်းမွန်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသည်။
Professor (Dr) Walter Tan
• Dr Tan ဟာ Raffles ဆေးရုံရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမတိုင်ခင် သူဟာ ခွဲစိပ် ဌာနရဲ့အကြီးဆုံး ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးအလှအပနှင့် ခန္ဓာကိုယ် ခွဲစိပ်ပြုပြင်မှူ ဆိုင်ရာ ခွဲစိပ်ဆရာဝန်လည်း ဖြစ်သည်။
Dr Steve Yang
• Dr Yang သည် အမေရိကန် ကောလိပ် ရဲ့ရင်ခေါင်းအထူးကု ဌာနမှ နိုင်ငံတကာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်ပြီး ဆေးကျောင်းမှာ ပညာဆက်လက် သင်ကြားပို့ ချနေသော ဆရာတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သည်။
Dr Chong Yong Yeow
• Dr Chongဟာ လေးဘက်နာ အထူးကုဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဓာတ်မတဲ့သော ရောဂါများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အထူး စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒါမတိုင်ခင်က စင်္ကာပူ ဆေးရုံကြီးရှိ ဓာတ်မတဲ့သောရောဂါများဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
Dr Teo Sek Khee
• Dr Teo သည် အထွေထွေ ရောဂါကုသမားတော်ကြီးဖြစ်ပြီး လူကြီးရောဂါများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အတွေ့အကြုံရင့်ကျတ်သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများ မှတ်ဥာဏ် ချို့ယွင်းခြင်း စသည့် လူကြီးရောဂါများကို အထူးကျွမ်းကျင်စွာ ကုသနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။
• Dr Fong ဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကျောက်တည်ခြင်း၊ဆီးကြိတ် ကြီးခြင်း စသည့်ရောဂါများတွင် အသုံးပြုသည့် (minimally invasive surgeries) ခေါ် အသေးစား ခွဲစိပ်ခြင်းများတွင် အထူး ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးသွားလျှင် သွေးပါခြင်း၊ ဆီးကြိတ် ကင်ဆာရောဂါများ စစ်ဆေး ခြင်း စတာတွေကိုပါ Dr Fong နှင့်ဆက်သွယ်၍ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
• Dr Liew ဟာ လက်ရှိ Raffles ဆေးရုံရဲ့ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဆီးချို ရောဂါ၊လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊ အဆီနှင့် ပတ်သတ်သောရောဂါ၊အရိုးပွ ရောဂါ စတာတွေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ ကုသနို်င်သူဖြစ်ပါတယ်။
• Dr Poon ဟာ ဆေးရုံကင်ဆာဌာနရဲ့အကြီးတန်း အတိုင်ပင်ခံ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာ မတိုင်ခင် သူဟာ စင်္ကာပူ ကင်ဆာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်သလို စင်္ကပူ သက်ကြီး ကင်ဆာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ တည်ထောင်သူ ဥက္ကထ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Raffles ဆးရုံတွင် သွားရောက်ကုသမည့်လူနာများအတွက် အောက်ပါ ဟိုတယ်များသည် တည်းခိုသူများထံမှ ကောင်းမွန်သော သုံးသပ်ချက်များ ရရှိထားသော ဟိုတယ်များ ဖြစ်ပါသည်။
Village Hotel Bugis, Pan Pacific Serviced Suites, Beach Hotel, Inter-Continental Hotels
အနီးအနားရှိ သွားရောက်ရန် လွယ်ကူသောစားသောက်ဆိုင်များမှာ
1. Albert Center Click here
2. Bugis Click here
3. Bugis Plus Click here
(အမည် ၊ကျန်းမာေ၇းအခြေအနေ၊ TMC)